Breaking News: भोलि सकिँदै निषेधाज्ञा : फेरि १५ दिन थप्ने निर्णय ! - Nepali in Australia
June 18, 2021 autherLeaveaComment on Breaking News: भोलि सकिँदै निषेधाज्ञा : फेरि १५ दिन थप्ने निर्णय !
जारी निषेधाज्ञा सात देखि १५ दिनसम्म थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रजिअ भट्टराईले बताए । भोलि राती सोमबारबाट जारी निषेधाज्ञा अवधि सकिन लागेको बेला प्रजिअहरुको बैठकले जारी निषेधाज्ञाका केही प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै समय थप गर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको हो । आज दिउँसो बस्ने बैठकले निषेधाज्ञाबारे निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । ** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **